Kana iwe ukasarudza kuPuerto Rico seunogara uchienda, iwe uri munzira yakarurama. Chinhu chakanaka, rudo, uye nhoroondo yechitsuwa ichi chichakwikwidzana nekunakidzwa kwako nemamiriro ayo akaoma. Kwamunoenda kunotarisa zvakakwana kune marudzi amarudzi api aunoda kuva nawo.
Nenguva isipi, Puerto Rico ine zvakasiyana-siyana zvakakwana kuti iwane chero chero ipi zvayo yezororo. Saka kana iwe uchida kusava nemazuva ako pamhenderekedzo yegungwa, shandisa tsika yakawanda seyaka inobvumira kana kupukunyuka mumvura yakadzika yemvura inonaya mvura, kana kunyura mukati mepamusoro-soro yepasi-resort resort, ichi chitsuwa chichakupa iwe nguva yakakwana yechando.
Zvichida inonakidzwa kuenda kune imwe nzvimbo kuPuerto Rico , inenge iri yekare kuSan Juan , asi ndechokuti ndakatora makore mazana mashanu ehuwandu pamusoro pemabhiza ose. Pane chisingaoneki chinonzi nostalgic charm pamusoro pekufamba mumigwagwa yecobblestone yeguta rekare, kushanyira mazambuko ayo ekare, uye kutora mumasvingo ayo akaisvonaka, akanaka ekudengenyeka.
Kwatingazogara : Nzvimbo mbiri dzinodanidzira dzichida kuPuerto Rico kupfuura dzimwe dzose - El Convento uye Chateau Cervantes. Kana uchida B & B, shandisa The Gallery Inn kutarisa zvakare.
Zvaunofanira kuita : Nguva refu inofamba muguta rekare, nechitsika pasi pasi Paseo de la Princesa usiku, inofungisisa, kunyanya manheru, apo guta rekare rinoshambidzwa mumucheka wakatsvuka.
Kana zuva rovira richifamba pamusoro pemvura chinhu chako, tungamira zvakananga kuPuerto Rico kumavirira kwegungwa . Izuva rinosviba (uye mabheji) pano zvinoshamisa. Rincón ine a laid back vibe. Vanhu vauya pano kuti vatize, kuti vafunge, kuti vatarise whale muna February. Iwe unogona kukodha motokari uye beach-hop kumusoro uye kuburukira kumhenderekedzo kusvikira uwana nzvimbo yako yakakwana, idya hutsva huchinge huvhara huster uye kumira kuBoquerón, uye kazhinji kupfuurira mazuva ako mukunyaradza kunofadza.
Kwatingazogara : Iri kero yakakosha, asi hapana nzvimbo yakanyanya kudiwa muPuerto Rico kupfuura Horned Dorset Primavera . Uye kuvira kwezuva kunofamba pano kunongofema.
Zvaunofanira kuita : Bhiza-hop, uye ugove nechingwa chimwe chete paAaron paHonded Dorset.
Kana nyika yePoerto Rico isiri kure zvakakwana kune nzvimbo yekuenda kwako, funga Vieques. Asi handizvo chete chikonzero ichi chitsuwa chinokurudzirwa. Iko-in-the-rima biobay, chisarudzo chemhenderekedzo yegungwa (ine mukana wakanaka wekuzviti uri wega kwezuva), uye runyararo chitsuwa vibe cheVièques chinoponesa zvakanaka.
Kwatingazogara : Kune avo vanogona kuzvisunga, W Retreat & Spa ndiyo inonyanya kugadziriswa pfuma pachiwi. Uye kune avo vanoda runyararo uye vakasiyana, ita Hix Island House kumba kwako.
Zvaunofanira kuita : Tora waunoda pane husiku husiku huno enda kuMosquito Bay , uye upinde murima pamwe chete. Nzira dzekufamba nenyuchi uye scuba diving excursions inogonawo kuva nzira inofadza yekupedza zuva.
Culebra inofanira kuchengetwa kune avo vakaroorana vasingatsvaki chinhu kunze kwekuti vawane kusvika pamunogona napo kubva kumusha wavo. Kunyange Vieques haikwanise kuswedera kumhanyi, kure, uye kubvisa magetsi eCulebra. Vaya vari kutsvaga nzvimbo yezvikepe zvinosvibisa hazvibatsiri pano, asi avo vanoda kunakidzwa nechepamusoro pemhenderekedzo dzakanaka kwazvo muCaribbean uye vanopedza nguva pachiwi chinotora anenge maawa maviri kuti chivhare nemotokari vachachida.
Kwokugara : Pane imwe hotera inofanirwa nevechikwata kupfuura dzimwe dzose muCulebra: Club Seabourne.
Chii chaunoita : Iwe haungatore chero kupfuura Flamenco Beach , asi kana iwe unogona kuzvibvisa, shandisa zuva rimwe chete kuCulebrita .
Kutaura nezvekuchengetedzwa, kune chimwe chinhu chingafanirwa kune nzvimbo yekudonhera mvura. Iwe unofamba uchikwira mumigwagwa inopisa mukati mezuva, uye kana iwe uine ruzivo, ona nzvimbo yemhepo yakashambidzika yekushambidzika kana mvura inopinda mumvura kuti utone iwe pachako kwemaawa mashomanana. Pausiku, rwiyo rwemaququi yemiti runoita serenade iwe, uye mwenje weguta ichange iri kure kurema. Vanhu vanodikanwa nemamiriro ezvinhu, iwe uchawa murudo zvakare zvakare pasi peEl Yunque's canopy inobwinya.
Kwatingazogara : Nzvimbo mbiri dzinouya mupfungwa nokuda kwehukama hwemakamuri avo uye kugamuchira vaeni vavo: Rainforest Inn ne Villa Sevilla.
Zvaunofanira kuita : Chikonzero chimwe chete iyo iyo mahotera akanyorwa: kubva panzvimbo dzavo, unogona kukwira kune imwe nzvimbo yega yega yega.
Kana iwe uchida nzvimbo yakashata, yekare uye yekoloni asi usingadi mhuka yeSan Juan , Ponce yakakwana kwauri. Guta repiri rePuerto Rico rinonzi Guta reSouth nokuda kwechikonzero: maumbirwo, runyararo ruremekedzo uye tsika dzakanaka dzePonce dzakaratidza vaenzi kwemazana emakore. Uye nokuda kwechando, inopa kuwirirana kwezvinhu zvezvakaitika uye kunyoresa nyore kugungwa.
Kwatingazogara : Ponce Hilton ndiyo hotera yakakwana yeguta.
Zvaunofanira kuita : Enda kunzvimbo yakanakisisa yeCastillo Serrallés , fambisa pamakwikwi egungwa nemvura, uye unakidzwe nenzvimbo huru, nekereke yayo nematsime.
Gumiguru Calendar ye Zviitiko muPuerto Rico
Zvokudya Zvokurayira paPuerto Rican Restaurant
Vakashanyira Vanotungamira kuSan Juan Yekare, kuPuerto Rico
Zvikepe zvePuerto Rico zvakanakisisa 10
Tsvaga Mafaro Anokonzerwa neGuánica Dry Forest
Disney World Kuenda Kutungamirirwa
Chinofanira Kuziva Kana Uchityaira kuSweden
9 Nhamba dzepamusoro dzeKean Chen Airport Airport dzeMari dzose
Sirivha Mudzimu - Kurwiswa Swendo Rwendo uye Purogiramu
Nzira Yokuverenga Nhamba YemaNish Irish Mapplates
Zombies muVancouver yeHalloween
Nzira dzeVV Vote Pari Pakati
Nzira Yokuchengetedza Mari Nezvokudya muHawaii
Aya Akanakisisa Makamba muAmsterdam
Osheaga 2017: A Music Festival Mutungamiri